Nolosha iyo Ujeedooyinkeed
Nolosha iyo Ujeedooyinkeed 0 Saturday 3rd December, 2016 in Aragtida Dadweynaha by Xarunta Dhexe Visits: 124
Nolosha iyo Ujeedooyinkeed Ujeedooyinka ka dambeeya Nolosha
U noolow ujeedo
U baro ujeedo
U hadal ujeedo
U daawo ujeedo
U soco ujeedo
U shaqee ujeedo
1.Tallaabo kastood qaadaysid iyo qaabkastood u nooshahay waa inay yeeshaan ujeedooyin ka dambeeya oo aad niyadda ku haysid.
Waxbaad barataa se ujeedadeedu waa inaad aqoon heshid, ku shaqaysatid, ku noolaatid oo aad wax ku hagtid , dadkana waxbartid una faa,ideysid.
2.Waad nooshay se sababtee u nooshahay maxaa xaq lagugu leeyahay maxaadse awood u leedahay oo aad qabsan kartaa, qaabkee u nooshahay , qaabkeese jeceshay inaad u noolaatid. Noloshaada maxaa ka dhiman maxayse dheer tahay nololaha kale sidee kor ugu sii qaadi kartaa sideese Alle u raali galin kartaa uguna mahadnaqi kartaa Alle. Sidee ayaad nolosha saxda iyo waddada saxdaa ku heli kartaa ? Su,aalahaas oo dhan jawaabtoodu waa adiga iyo sidaad u fahantid ugana jawaabtid . Waa fudayd waana adayg waa fudaydoo waa marka aad isku daydid markastana maankaaga ku haysid waa adayg oo waa adaygoo waa marka aad ka baqatid ama aanad maankaba ku hayn.
Adiga ayaan kula hadlayaa hadda waa adiga waad gaadhaysaa waad helaysa waad farxaysa waanad u qaadan waayi doontaa hadaad u noolaatid Sida Alle inoo jideeyay oo ah sida noloshu ku qurux baddan tahay. Raac wadddadii Nabi Muxamed SCW iyo asxaabtiisii raaceen kuna raaceen amar qaadashadda Alle.
Waad nooshahay oo waadigan akhrinaya, Way dhinteen mana akhrinayaan, waxaad haysataa jaanis iyo wakhti aad noloshaada ku gaadhsiisid meel sare oo if iyo aakhiraba ku anfacda ku dadaal oo ku riyood markasta iyo meelkasta oo aad joogtid.
U sammir nolosha , u dadaal nolosha una dhoolacadee nolosha, ha ka quusan nolosha hakana jeedsan khayrka , ha ka daalin oo ha ka seexan nolosha.
3.Waad hadlaysaa markasta waa in aad ujeedo ka leedahay oo aad cid wax u sheegaysaa si aad cidaad adna wax uga heshid.
4.Waad daawanaysaa se ujeedo u samee maxaad ka faa,ideysaa maxaadse ugu luminaysaa wakhtiga , waad daawanaysa oo caalamkaad ka war helaysaa waxa ka socda waa kuu faa,ido waad daawanaysaa oo wacdi iyo tafsiirbaad daawanaysaa waa faa,ido balaadhan.
5.Waad soconaysaa oo meel khayr ku jiro u soco, waad soconaysaa oo shaqo ama shaqodoon ah ama booqashaa ayaad u soconaysaa , waad soconaysaa oo hawl gaara ayaad u socotaa socodkaaga intaanad bilaabin ka sii fikir sababta iyo faa,idadada ka iman doonta socodkaaga.
6.Waad shaqaysaa u shaqee ujeedo kana fikir haddii aad shaqaysay maxaad ka faa,iday maxaad se u shaqanaysaa shaqadan aad haysaa ma tahay mid kugu haboon haddii ay haa tahay sax haddii kalana wakhtigaaga sug oo dadaalka ka badi.
Shaqo doonbaad tahay maxaad u raadinaysaa shaqada sideese u raadinaysaa qaabkee iyo halkee laga helayaa shaqo waliba ta aad rabtid. yeelo dad baddan oo aad xog ka heshid , haddii Aad bilaa shaqo tahay waxay ku xidhan tahay inaad shaqo heshaa inta qof ee aad xidhiidh wada leedihiin ama inta jeer ee aad shaqo doonatay ama aad ku noqnoqotay goobta aad shaqada ka doonatay.
Farhan Mohamed Sultan Nur (Rakad )
Send to your friend Related [Sawiro] Buug loogu Magac daray "Midabaddii Madowga iyo Cadaanka ee Noloshayda" ( The Bright & Dark Colour May 07, 2017
Maxaadiradda Saaka Iyo Karin News Oo Aad U Qiimo Badan [Macnaha Nolosha] Waxa Soo Jeedinaya Sh Mustafe Xaaji Ismaaciil. May 04, 2017
Xaalad Adag Oo Dhanka Nolosha Ah Oo Ay Wajahayaan Deegaanadda Hoos-Yimaada Ceel-Afweyn Iyo Dar Xumadda Dadka Ka Muuqata. May 01, 2017
MAQAAL: Dawladda Iyo Nolosha –Qaybtii Koowaad. W/Q: Dr-Mohamed Abdilahi . April 11, 2017
Biyuhu Waa Nolosha, Noloshuna Waa Biyaha. W/Q:Musharax Maxamed Shaami - April 10, 2017
Sirta Ku Duugan Ey Dad Cun Ah Oo Imaaraadka Carabtu Qaab Qarsoodi Ah Berbera Ku Keenay Iyo Xadiga Dadka Ay Doonayaan In April 08, 2017
Nin Saxafi Ka Ah Telefishanka Farmajo Oo Sirta Nolosha Xamda Yar Soo Bandhigay "Anigu Hargeysa Ma Ihi Ee Itoobiyaan April 08, 2017
Shirkado Shisheeye Oo Nolosha Ku Dhibay Shacab Dan Yar Ah + Wasiir Gurey Oo Warqado Ogolaansho Ah Siiyey Gaalo Caradii S March 25, 2017